Daawo Zara Mcdermott oo ku dhowaaqday inay qaawan tahay jacaylkeeda Lilly Photoshoot - Cradle View
Zara Mcdermott Ku dhawaad ​​sawir qaawan
by แม่ น้อย ตากสิน 22nd November 2018 30th November 2021
Leave a Comment Daawo Zara Mcdermott oo ku dhowaaqday inay qaawan tahay iyada oo wadata sawir qaade jacaylkeeda Lilly
Zara Mcdermott ayaa markii ugu horreysay caan noqotay markii ay u soo muuqatay tartame Jaziiradda Jacaylka. Waxay soo galisay Instagram maanta si ay u dhejiso sawir kale oo muujinaya jidhkeeda quruxda badan ee la madoobay ee wada shaqayn cusub oo ay ka muuqato Love Lilly.
Shes waxa ay dareen baahsan ka heshay Instagram-keeda caanka ah halkaas oo ay si joogto ah u geliso sawirada iyada iyo saaxiibkeed.
Zara waxay u sheegtay 990,000 taageere: "Ururintayda @with_love_lilly waa toos! Aad ayaan u jeclahay."
Boostu waxay ururisay in ka badan 52,000 oo jecel taageerayaasha iyo sidoo kale faallooyin xamaasad leh.
Qoraal ay wadaagto Zara McDermott (@zara_mcdermott)
Waxay soo dhigtay Instagram-ka si ay ugu dhejiso iskaashiga Love Lilly, oo ah sumad caan ah oo dharka hoostiisa ah oo Zara ay xiriir la leedahay. Waxa ay caan ku yihiin samaynta dharka hoostiisa ee qaawan ee qaawan.
Hoos waxaa ku yaal sawir kale oo Zara ah markii ay ku jirtay dharkeeda hoose ee Sheer. Waa wax aad u wanaagsan oo lagu daro ururinta aadka loo jecel yahay ee sawirada dharka hoostiisa ee Zara ay soo galisay bilihii la soo dhaafay.
Haddii aad rabto inaad la socoto qoraaladayada ugu dambeeyay markaa fadlan ka fiirso inaad heeso ilaa diritaankayada emailka si aadan waligaa u dhaafin boostada.
Waxaan daabacnaa waxyaabo cusub toddobaad kasta, oo ay ku jiraan diritaanka joogtada ah ee shakhsiyaadka caanka ah sida Zara Mcdermott.
Gelitaan Hore Haganai - Miyay jiri doontaa xilli 3?
Gelitaanka Xiga Ma arki karo kuwa neceb